warkii.com » Kheyre oo ka shaqeeynayo in “Madal Cusub” looga dhawaaqo Dhuusamareeb
R/W Rooble oo kulan isugu yeeray madaxda laamaha amniga + Ujeedka
Kheyre oo ka shaqeeynayo in “Madal Cusub” looga dhawaaqo Dhuusamareeb
Iyada oo Xasan Kheyere uu mudo ka badan 10 cesho dalka dibasiida ku maqanaa ayaa markii uu dalka ku soo laabtay waxa uu dubadiiba qayb ka noqdoay abaabulka shirka dowlad goboleedyada oo xalay ka dhacay qadka internet-ka ee la iska arko.
Inkastaa oo uusan isagu ku jirin kulankii xalay, hadana inta uusan kulanka dhicin ayuu waxa uu qadka taleefanka kula hadlay dhamaan madaxda dowlad goboleedyada isaga oo u sheegay in uu la safan yahay islamarkaana qadiyadooda uu taageerayo.
Xasan Kheyre ayaa isla xalay u sheegay madaxda dowlad goboleedyada in uu isagu ka soo qaybgali doono kulanka la iclaamiyay in uu ka dhaco magaaladda Dhuusamareeb maalinta Khamiista ee bisha Juulaay tahay 9ka. Waxa uuna u xaqiijiyay in xitaa hadii Farmaajo ka codsado inuusan ka qayb-galin ay ka go’an tahay in uu isagu soo xaadiro.
Dhanka kale madaxda dowlad goboleedyada ayaa ku cadaadiyay in uu saacadaha soo socda uu Kheyre dhankiisa soo saaro qoraal uu ku taageerayo soona dhaweynayo shirka Dhuusamareeb.
Kulanka Dhuusamareeb ayaa la filayaa in gaba-gabadiisa looga dhawaaqo aas-aaska madal la midii tii 2016, taas oo ahayd “Somali Leadership Forum”. Taas oo la wareegayso geedi-socodka siyaasadda dalka. Kheyre oo ay ka go’an tahay in uu Farmaajo qarka ka tuuro inta uusan iscasilin, galiyana xaraj keeni doono in Farmaajo lagu qasbo in uu hoosyimaado dowlad Goboleedyada.
R/W Rooble oo kulan isugu yeeray madaxda laamaha amniga + UjeedkaSeptember 29, 2020